यो साता यी राशिहरुको हुँदैछ भाग्योदय ! कार्तिक २८ गते देखि मंसिर ४ गतेसम्मको राशिफल हेर्नुहोस् « Gaunbeshi
यो साता यी राशिहरुको हुँदैछ भाग्योदय ! कार्तिक २८ गते देखि मंसिर ४ गतेसम्मको राशिफल हेर्नुहोस्
मेषः ब्यापार ब्यवसायमा नाफाको सम्भाबना रहेकोले यो साता उत्तम देखिएको छ । अध्ययन अध्यापनमा समय मध्यम रहनेछ । साताको अन्त्यतिर भने सभासम्मेलनमा सरीकहुने अवसर प्राप्त रहनेछ । कला कौलशताको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । योसाता आर्थिक क्षेत्रमा राम्रो प्रगति होला । साताको प्रारम्भमा आर्थिक क्षेत्रमा सामान्य समस्या आईपर्नेछ । देश परदेशको यात्राको सम्भाबना रहनेछ । गरीरहेको कार्यमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुनाले कार्य ढिलाईको सम्भाबना रहनेछ । स्वास्थका क्षेत्रमा सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । नयाँ लगानि गर्नका निम्ती बिशेष राम्रो समय रहेकोछ ।